फेसबुक – बाह्रथरी कुरा
कुरा गर्दा विरहको गीत गाए जस्तो लाग्छ तर फ्याट्ट फेसबुकले हाम्रो साइटको लिंक ब्लक गर्दिएछ हेर्नुस्। बंगारा झारेकैले लिंक ब्लक भए जस्तो त लाग्दैन तर पनि भयो। काम गर्दै जाँदा कहाँ के गल्ती हुन्छ त्यसलाई सच्याउँदै र सिक्दै जाने प्रयास जारी छ। हाम्रो प्राविधिक टोली २ दिनदेखि यो समस्या समाधानको लागि फेसबुकको सपोर्ट सिस्टमसँग नियमित कम्युनिकेसन गरिरहेको छ। अब त्यो मुला फेसबुक पुरै अटो सिस्टमबाट चल्ने, हामी औंला सिस्टमबाट। याँनेर कुरो गडबड भैरा’छ। Continue reading →
Posted on March 13, 2016 by Boston	1
फेसबुकमा मेरा कैयौं यस्ता साथीहरुसँग जम्काभेट भएको छ जोसँग वास्तविक जीवनमा एकपटक पनि दोहोरो कुरा भएको छैन। एउटै भोजमा सँगै भेटियो र मलाई गला लागेर हिक हिक हुदाँ पनि उसले मलाई पानी दिँदैन तर पनि उसले मलाई फ्रेण्ड रिक्वेष्ट पठाएको हुन्छ। अब भन्नोस्, म किन उसलाई मेरो साथीभाइ इस्टमित्र भएको फेसबुकमा भित्र्याउने ? मलाई कसले के भन्छ (कस्तो सम्बोधन गर्छ ), म कहाँ जान्छु (कहाँ गएको फोटो अपलोड गर्छु ), कोसित हिँड्छु (मेरो फोटोमा कसलाई ट्याग गर्छु ) यो सब खोजीनीति उसलाई किन दिने? तपाइँलाई दिन मन लाग्छ त दिनोस्। परिवार भित्र पनि के कुरो अमिल्दो लाग्छ भने- बाले फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाम्चन् । बा, ससुरा वा मामा साथी कसरी बनुँ म ? Continue reading →
Posted on March 9, 2016 by Alpha	10